Ari Kupona Mupukunyuki - Hinds Feet Farm
Pataifanira kuvhara zvirongwa zvedu zvezuva-munhu pakutanga kwedenda reCovid 19 takanga tichitsvaga nzira dzekuti nhengo dzechirongwa chedu dzirambe dzakabatikana uye dzakabatana panguva yavo pamba (uye edza kurovawo kufinhwa!). Saka, takaedza zvinhu zvakati wandei zvakasiyana: mapepa ezviitiko zvemapepa, iwe chubhu mavhidhiyo evashandi vanodzidzisa mabasa emaoko kana kuverenga, runhare kubva kuvashandi, uye chaiwo zviitiko pamusoro peZoom. Chakazoguma chakamira chaive chiitiko chaicho chaibvumira nhengo kuona nekutaura kwete nevashandi chete asi dzimwe nhengo (kubva kumapurogiramu emazuva ese) munguva chaiyo. Zvakazoguma zvave kurova zvekuti takaenderera mberi nechirongwa ichi kunyangwe zvirongwa zvedu zvemazuva-munhu zvavhurwazve uye nekuzviwedzera kuti zviwanikwe kune wese akapona kukuvara kwehuropi mudunhu reNorth Carolina-kwete chete nhengo dzechirongwa dziripo. ! Saka, ikozvino Hinds 'Feet Farm ine nhengo chaidzo zvakare dzisina kumbotsika tsoka pane imwe yemakampasi edu. Nyika yatiri kurarama mairi!
Chimwe chiitiko chinonakidza chakauya munaGunyana 2021 patakatanga mubatanidzwa neBrain Injury Association yekuNorth Carolina neCardinal Innovations izvo zvakatibvumira kuwedzera hurongwa hwedu hwechokwadi uye kusvika kune vakapukunyuka vakatowanda mudunhu rese. Nhengo dzinokwanisawo kutora mukana weiyo yemahara yegore rimwe nhengo kuBrain Injury Association yeNC. Iro zita rechirongwa rakachinjawo kuita Thriving Survivor Virtual Chirongwa uye rinosanganisira varairidzi vanobva munharaunda pamwe nevashandi vedu. Isu tave kupa chaiwo programming Muvhuro kusvika Chishanu pa9a, 10a uye 1p. Makirasi anosanganisira: nyeredzi, mumhanzi kurapwa, mitambo, bhuku kirabhu & nhaurirano, ngoma, inochinja maekisesaizi, makamuri ekupukunyuka, karaoke, uye kufunga pakati pezvimwe zvakawanda.
Kana iwe uchifarira kujoinha iyi MAHARA chaiyo chirongwa chakavhurika kune vakuru vakapona kukuvara kwehuropi mudunhu rese reNorth Carolina, ndapota. click here!